Faa’iidooyinka Caafimaad Ee Qosolka (Health Benefits of Laughter) | FooreNews
Home Aragtida Dadweynaha Faa’iidooyinka Caafimaad Ee Qosolka (Health Benefits of Laughter)
Faa’iidooyinka Caafimaad Ee Qosolka (Health Benefits of Laughter)
FoorenewsJul 02, 2015Aragtida Dadweynaha, Barnaamijo, wararka0
Akhriste waxa laga yaabaa in aad is waydiiso xidhiidhka ka dhaxayn kara qosolka iyo caafimaadka iyo sida qosolku u yahay mid dhalin kara ama qofka u horseedi kara faa’iidooyin caafimaad. Qosolku wuxuu jidhka Bani Aadamka u taraa faa’iidooyin badan oo aan la soo koobi karin, qoraallo iyo daraasado kala duwan oo laga sameeyay saameynta qosolku uu ku leyahay jidhka bani’aadanku, waxay tilmaameen in qosolka uu qeyb weyn ka yahay daaweynta cudurro dhowr ah oo dadka ku dhaca kuwaasi oo la ogaaday in qosolku daawo u noqon karo ama u yahayba. Baadhitaanadaas dartood waxaa soo baxay dhakhaatiir wadata takhasus la yidhaahdo “Laughter Therapist”, waana takhasus ka sii farcama cudurrada psychology-ga. Dalal badna oo maanta dunida ka tirsanna waxaa laga helaa dhakhaatiir badan oo cilmi nafsi ah oo si weyn dadka ugu daaweeya qosolka ama ugu qora qosol badan in ay la yimaadaan si kastaba haloo adeegsado in qofka looga qosliyee. Dhakhaatiirta qaar waxay aaminsan yihiin in qosolka uu la mid yahay jimicsiga xagga faa’iido ahaan. Waxaana wakhtiyadan dambe aad la isugu dhiirri geliyaa in qofku noqdo mid dhoollacaddeeya oo qosla ugu yaraan iska keena oo farxad iska baadhbaadha.
Haddii aan soo koobo faa’iidooyinka uu leeyahay, qosolku wuxuu ka shaqaysiiyaa murqaha wejiga oo idil iyo muruqyada jidhka qeybo badan oo ka mid ah, maxaa yeelay ma jiro qof wajiga kaliya ka qosla, taasi waxay keentaa in wadnuhu uu aad u garaacmo, qofkana aad u neefsado, sidaasna jidhku uu ku helo Hawda oksajiin badan.
Weliba waxay dhakhaatiirtu arkeen qofku markuu qoslayo gacmaha kor u qaada inuu ka qaadasho oksajiin badan yahay qofka aan gacmaha dhaqdhaqaajin. Sidaa darteed waxa la dhiirri gelinayaa in qofku marka uu qoslayo ugu yaraan gacmaha dhaqaajiyo. Cilmibaadhayaasha caafimaad ee arrinkan u kuur galay waxa ay tijaabiyeen qosolka inta jeer ee uu wadnaha garaaciisa gaadhsiinayo si dhiiggu kor ugu kaco, neefsashadane u siyaadiyo, waxaanay arkeen inay u dhiganto qofka oo ku jimicsada mishiinka tread millka 10 daqiiqo, faa’iidii uu wadnaha ka heli lahaa in hal qosol uu ku filan yahay, qosolkaasne waxaa loo yaqaanaa ” Hearty laughter”.
Cilmi-baadhe kale wuxuu sheegay hadduu qofku uu qoslo muddo 10 daqiiqo ah in uu jidhkiisu gubayo 50 calories, taasoo jidhkiisa siisa tamar badan oo fiican. Cilmi-baadhayeel Maraykan ahi waxay tijaabiyeen saamaynta qosolku uu ku leeyahay xididada jidhka iyagoo laba koox u qeybiyay dadka la baadhayay, kooxba ay daawadeen filin qosol leh, kooxda kalana ay daawadeen filim murugo leh, kadib baadhitaano lagu sameeyay waxaa lagu arkay in dadka daawaday filimada maadda ah (comedy) xididadooda ay dabacsanaayeen oo qulqulka dhiigu gaadhayay jidhka qeybihiisa kala duwan oo uu ahaa sidii la rabay. Dadka qaba xanuunada lafdhabarta gala oo joogtada ah, waxaa la arkay in qosolka uu daawo u yahay, oo habeenkii hurdo fiican heli kara haddii ay qoslaan iyagoo fiirsada filin qosol leh ama wax qosol leh looga sheekeeyo.
Cilmi-baadhis kale oo lagu sameeyay qosolku saamaynta uu ku leeyahay dadka sonkorta qaba, waxaa la arkay in dadka badanaa qosla in sokortooda ay ka kontarool fiican tahay dadka murugoodu badan tahay. Cilmi baadhayaal kale waxay soo daabaceen warbixin sheegaysa iyo qosolku uu sare u qaado xasuusta weliba middeeda dhow, si sahlana wax u soo xasuusan karo haddii loo eego ama la barbar dhigo qofka murugeysan. Haddii dhinaca nafsiyan laga eego, faa’iidada qosolka mid la soo koobi karo ma aha, maxaa yeelay waxaa la arkay dadka qoslaa badanaa waa dad furfuran oo noloshoodu aanay u badnayn feker iyo welwel, taasoo ka badbaadinaysa cudurka niyad jabka iyo diiqadda, iyadoo dheecaanada jidhka faa’iidada ugu jira sare u qaaddo, kana badbaada, Dhiig-karka, Cudurka Macaanka, Wadna Xanuunka, Faalijka, Gaaska iyo xanuuno kale oo uu keeno qulubka iyo walbahaarku (stress). Dhinaca kale qofka qosolka badan ee bashaashka ah, waxay cilmi-baadhayaashu sheegeen in aanay dhakhso uga soo daahirin ama uga soo muuqan astaamaha gabawga (Duqowga), haddii aanu ahayn qof isticmaala mukhaadaraadka sida Qaadka, Khamriga iyo Sigaar Cabka. Sidaa darteed qosolka halagu dadaalo, horeba waxaa loo yidhi: Laughter is the best medicine”.
Previous PostAxmed M. Seed Oo Ka Hadlay Qurbejoog Boorama Lagu Xidhxidhay iyo Qodobo Hordhac U Ah Barnaamijka Waddani Next Post1-Da Juulay: Maalin Somaliland Eedday